Nyochaa M! Gingde blọgụ maka Dollar | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 17, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Kwadoro Post: Nyocha
Mgbe PayPerPost na ReviewMe bidoro na mbụ, enwere m mmechuihu. Ọ dị m ka a ga - asị na 'ịde blọgụ maka dollar' ga-agbanwe oge maka ihe kacha njọ. N'abalị a, achọpụtara m ole na ole na blọọgụ ndị ọzọ na ReviewMe na-eji usoro nke aka ha akwụ ụgwọ ndị na-ede blọgụ iji nyochaa onwe ha. Ọ dọọrọ uche m nke mere m debanyere aha iji lelee ya.
Ọ bụ echiche na-atọ ụtọ. Dabere na mgbasa ozi nke blog gị (Alexa, Technorati, RSS, wdg), a na-enye blog gị otu ego dollar ị ga-akwụ ụgwọ mgbe ị mechara nyochaa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-akwụ gị ụgwọ dabere na ọnụọgụ ndị folks guru blọgụ gị. Ọ bụghị echiche ọjọọ. Echere m na nke a nwere ike ịbụ ụzọ dị mma maka ndị mgbasa ozi. More na nke ahụ…
ReviewMe anaghị achọ ka ị dee nyocha dị mma! N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ikwu eziokwu. Echere m na nke ahụ ga-adọta ndị mgbasa ozi na nnukwu ngwaahịa, mana ReviewMe ga-achụpụ ndị mgbasa ozi na-adịghị mma. Hey! Nke ahụ dị mma maka anyị abụọ, ọ bụghị ya? Ihe ikpeazu m choro ime bu ka m juo ndi na agu ogugu m ka m gbalita ime ego ole na ole. Nke ahụ ga - etinye ndị na - agụ akwụkwọ m n’ihe egwu ma ọ bụ ya bụ ihe m tinyere n’ime oge buru ibu na - agba mbọ iwulite. Enweghị m nnukwu aha ma ọ bụ ijeri dollar, n’ihi ya enwere m obere oge. Ndị mmadụ na-achọkarị ịkọ nnukwu ụmụ nwoke.
Ihe ọzọ masịrị m bụ na ha chọrọ ị ga-edo anya na ọ bụ post blọgụ na a na-akwụ gị ụgwọ maka:
Ikwesiri igosipụta na ọkwa a bụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ n'ụzọ ụfọdụ. Ndị a bụ ụfọdụ echiche: "Akwụkwọ Nkwado:", "Ihe ndị a bụ nyocha akwụ ụgwọ:" "Mgbasa ozi:".
Yabụ site na azụmaahịa, m na-asọpụrụ ọrụ ReviewMe ma chọọ ha nke ọma! E nwere oge ụfọdụ enwere m nsogbu ịgbalị iche echiche maka post m ga-etinye, mana m na-arapara n'etiti nkume na ebe siri ike. Ọ bụrụ na anaghị m biputere kwa ụbọchị, M na-ahụkarị omume na okporo ụzọ dị ala. Ọ bụrụ na m na-ede akwụkwọ kwa ụbọchị, ahụrụ m ka ọ na-agagharị n'okporo ụzọ. Ọdịnaya B king eze na m blog. Ihe m na-achọghị ime bụ igbu oge gị ebe a, n'agbanyeghị. Ya mere, agbagharawo m ihe ndị ahụ na ụbọchị ụfọdụ mgbe m na-enweghị ihe ọ bụla bara uru iji gbakwunye mkparịta ụka anyị.
Aga m anwale ReviewMe nwa oge… ọ bụghị dị ka isi iyi nke nnata, mana aga m ahụ ma ọ nwere ike jupụta 'voids' ahụ ebe m ga - eziga banyere ihe mana enweghị m ịga n'ihu. Aga m agwa gị eziokwu, m ga-emekwa ka unu mara ihe ọ na-eme. Achọghị m itinye mmekọrịta anyị na nsogbu!
Banyere ọrụ ahụ, ọ na-aga n'ihu n'ihu. Ekwesịrị m ịsị na saịtị ahụ na-agbagwoju anya dị ka hel, ọ bụ ezie! Enwere ngalaba mgbasa ozi na ngalaba blogger. Ọ dị mfe ịchọpụta akụkụ nke ahịrị ị nọ, mana etinyereghị saịtị ahụ n'ụzọ ahụ. E nwere ihe a kehoraizin menu, n'aka ekpe menu, mgbe nhọrọ n'ime ọdịnaya mpaghara, a n'okpuru menu…. M ka na-echeta oge m hụrụ ọkwa m n’ime ebe ahụ mana enweghị m ike ịchọpụta etu m ga-esi laghachi ebe ahụ !!
Ya mere, ... oké ngwaahịa, lousy usability. Ndụmọdụ m ga-abụ maka ndị nọ na ReviewMe ka hazie usoro azụmahịa niile nke ndị mgbasa ozi ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ ga-ewe site na ndebanye aha saịtị, ịgbakwunye blog, ịgbakwunye nyocha, ịtọ ntọala ịkwụ ụgwọ, wdg wee mepụta interface gburugburu usoro ndi isi na usoro ahia. Echere m na m ga - eme nnukwu ọdịiche dị n'etiti mgbasa ozi na ibe blogger na usoro. Inwe bọtịnụ ndị dị na ibe ha bụ ntakịrị ihe ma ọ baghị uru.
Ọfọn, nke ahụ bụ ya! Nke a bụ mbụ m Review na ReviewMe… nke ReviewMe! Atụrụ m anya na ị nwere ekele maka ezi okwu m.
Dec 1, 2006 na 1:53 PM
Ntughari: Anatara m ugwo site na Paypal maka ntinye a taa.